Wonekana Mandriva, Mhoro Fedora 22 | Kubva kuLinux
Wonekana Mandriva, Mhoro Fedora 22
diazepan | | Kugoverwa
Nezuro takadzidza kuti Mandriva, kambani, rakavhara. Ndakaverenga zvakawanda zvinosuwisa zvirevo pa twitter nezve izvi uye ini ndoona kuti vashoma vanhu vaiita kunge vanoziva kuti muchokwadi Mandriva, kambani, haisisiri kuita Linux kugovera kwemakore akati wandei. Kugovera kweMandriva Linux ikozvino kwave OpenMandriva (uye pakupedzisira kwakagadzirwa sePCLinuxOS neMageia).
Uye semumwe munhu akatumira tweet, "FOSS iFOSS." Ichokwadi! Ndiro simba remahara uye rakavhurika sosi software inochengeta mapurojekiti ari mupenyu, uye ndicho chikonzero nei ndichifunga kuti kugadzira Mandrake Linux makore 17 apfuura kwanga kusiri kutambisa nguva kwese 🙂
Uye ikozvino, ngatiregei kusuruvara, isu tinofanirwa kutarisa kune yanhasi zvinonetsa IT: zvakavanzika uye neGoogle kuzvitonga. Uye zvinhu zvakawanda zvinonakidza!
Mashoko kubva kuna Gaël Duval, muvambi weMandrake. Mandriva yakabviswa mushure memakore ekurwisa kubhuroka uye neruzhinji rwevagari vayo vachienda kuMageia (kana Rosa Linux).
Uye kune rimwe divi Fedora 22 yakaburitswa. Ino nguva inouya nekernel 4.0.4, GNOME 3.16, KDE Plasma 5.3, GCC 5.1 uye icing pane keke: iyo yekutanga yeDNF package maneja semutsivi weYUM. Uyu maneja wepakeji wakagadzirwa sekunyorwazve kweYUM nekuwedzeredza kwakanyanya mukumhanya, ndangariro kushandiswa uye kugadzirisa kutsamira (nekutenda kumaraibhurari eHawkey uye libsolv), pamusoro pekutsigira Python 3 uye kuva yakanyorwa nani API.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Wonekana Mandriva, Mhoro Fedora 22
cunchbang akataurawo zvakanaka
4 months ago akadzingwa basa
Elmer foo akadaro
Hongu, asi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana zvachose, iye oga mugadziri uye muchengeti, akasarudza nenzira kwayo, kana kwete, kuti kuvapo kwayo kwaisakosha. Achiri mupenyu paforogo yake zvakadaro.
Pindura Elmer Foo
Pachayo, musimudziri akataura kuti kuvapo kwayo kwaive kusisina basa, nekuti kudiwa kwevashandisi vane maPC ane mashoma kana angangoita zero zviwanikwa kwakadonha zvakanyanya, tese nekutenda kune yakaderera-mutengo All-in-one (Rasperry Pi, Ardruino) yaita kuti zviwanikwe nevanhu vazhinji kuti vashandise PC.
Zvinonyadzisa kuti Mandriva akatisiya uye ndinorangarira kuti iyi distro ndiyo yekutanga yakagadziriswa yandakaita mumawindo; _;
Mune yangu kesi, yaive yekutanga distro yandaigona kushandisa seinotsiva yangu Windows XP diski yakanga yarova nguva iyoyo.
Julio Saldivar akadaro
Kunyadzisa kukuru, yaive imwe yemahara distros mumakore masere apfuura. Yaive yekutanga yandakaisa papc yangu uye yakandiperekedza kwemakore akati wandei, kwandiri panguva iyoyo chishamiso. Imwe yandakashandisa pakutanga yaive Zenwalk uye zvakare hafu yekufa.
Kuonekwa kwakashata kwedistro, ndinoshandisa debian 8.
Kana iwe ukaisa Firefox kubva kumazororo ari muLaunchpad PPA, zviri pachena kuti ichaonekwa seUbuntu.
Chinhu ndechekushandura mushandisi mushandisi.
Mhoro Mandrake. Kutenda iwe, ndakafarira mabhenefiti eGNU / Linux. (Ndichine Mandrake 9 CD).
Akadamburwa kwemazuva mashoma, uye ini ndaive nenhau idzi dzekudya kwemangwanani!
Zvinoshamisa kuti ndiri kunyora kubva kuMageia, saka ini ndiri chikamu chekutsakatika ndinofungidzira. 🙁
Nyaya kusvika parizvino?
Ndiri kumirira mazuva mashoma kuti ndigadzirise, kunyanya kuti ndipe nguva kumazororo andinoshandisa.
Simply Mwari anoramba achirangarira avo vakatora matanho edu ekutanga muLinux uye kunyanya Kde
Zvakaipa, mandrake (ini handirangariri ndeipi) yaive yekutanga distro kuwana pane yangu hard drive, ipapo mazhinji acho akatevera, asi mandrake ndiyo yekutanga, uye ndine urombo
Gonzalo martinez akadaro
Zvakaipa, mandriva ndiyo yekutanga distro yandakashandisa imomo muna 2006-2007, ndaifarira kwazvo, kunyangwe kubvira 2009 main distro yangu iri fedora, kusvika 2010 ini ndakatevera nzira.
Mageia yanga isisina kufanana, ichikwanisa nekuti yaive neimwe nhanho yelinux kare, uye ndakazojaira Fedora yakawanda.
PS: PCLinuxOS haina kukura kupfuura mageia uye openmandriva?
Pindura Gonzalo Martinez
Mune yangu, Mandrake akatanga ini, anopfuura makore makumi matatu nemashanu apfuura. ushamwari distro apo pakanga pasina imwe.
Ini zvakaitika ndichichinjira kuDebian, pane floppy disks.
Ini ndinoenderera naDebian. asi kutuka Mandrake ndiko kwakaderera. Paunenge usina kuzvarwa, kana pawakabhadhara distro isina Internet. Ndino. Zvinonyadzisa sei.
Ini ndinotenga linux distros, kwemakore makumi matatu nemashanu. Ndakavaona vachikura uye vanyangarika.
AH, PCLinuXOS, inondinakidza, yakafanana nedudziro yakaderera kutevedzera, seManjaro.
Ini ndinochengeta mubhokisi rayo, uye nebhuku muchiSpanish, iyo yekutanga vhezheni yeGerman yeSUSE. Kubva panguva iyo Windows yaisaziva kuita O nejoinhi.
Zvakanaka, zvakare mubhokisi rayo, yekutanga vhezheni ye OS / 2 Warp. Zvinhu zvipi.
Iye zvino kuisa OS ndeyekutengeserana.
Vladimir Paulino akadaro
Uye distros inoramba ichinyangarika. Iri ibasa rinonetesa kugadzira distro kuitira kuti vashoma vashoma mazana mashanu vanhu vaishandise, zvachose, uye seOS yavo yesarudzo. Izvo zvinonetesa, kana munyika mune vanopfuura bhirioni veWindows vashandisi, uye vashandisi veMac, zvakati wandei, asi mamirioni akati wandei zvakare. Ubuntu, ingangoita iri pakati pemakumi maviri nemakumi matatu emamiriyoni. Asi, kushanda kuitira kuti vashoma chete vashandise izvo zvawakaunganidza nekuraira, hazvibatsire, maererano nenguva / nesimba.
Ini ndinofunga kuvandudza distros kunogona kupambadza hunyanzvi uye matarenda. Vanhu vakaita sevaya veVLC kana Firefox, vakatungamirwa nefilosofi yeRusununguko Mukuvandudza, uye vakave nebudiriro yekutinhira, inozivikanwa. Hafu yenyika inoshandisa yavo IT mhinduro, vane mukurumbira wakanaka. Vanhu vane tarenda kwazvo vanoshanda mukuvandudza distros vanogona kuita sevhisi iri nani kana vakatsaurira tarenda iri kukudziridza mapurogiramu akanakisa uye anobatsira epasi rose reLinux, uye vachitoita kuti vayambuke.
Kwandiri, semushandisi weLinux chikumbiro senge OpenShot yakakosha zvakanyanya kupfuura kugovera kwakawanda kunze uko kwataurwa. Ini ndinotoda kuti vaite kuti iwirirane neWindows. Kuisa tarenda yakawanda mukugadzira chirongwa chinonyatsodiwa kunogona kuve kuri nani pane kugadzira distro (kana chinobva) apo, mukukosha, uye nemazano avo, panotova nema distros mazhinji uye ivo vese vanoita zvakanyanya chinhu chimwe chete, kana ivo vanogona kugadziridzwa nezvazvo.
Pindura Vladimir Paulino
Ndine CD rangu pamberi peiyo vhezheni vhezheni 7.2 yandaive mushandisi anodada kumashure mukupera kwa2000, ndinongotenda boka rakanakisa revagadziri vakaita kuti zvikwanise kuswedera padhuze, kuziva nekugara zvachose munyika yeLinux, mushure kuyedza kwakawanda kwakapfuura, senge neRHel 5.1 muzhizha ra'98, semuenzaniso.
Nhasi rutsigiro rwangu mune zvehupfumi ndiLinux, haisisina PC yakazvininipisa yakaiswa pamba sezvandaigona uye kuba nguva kubva kumhuri yangu, asi se sysadmin mune nharaunda yemaseva anopfuura mazana manomwe muVmWare uye nevashandisi vangangoita zviuru makumi maviri.
Ini ndine makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa uye ndinoramba ndichinakidzwa nekushamisa kwesimba kwevanozivikanwa uye vasingazivikanwe vanopa mune ino huru, huru nyika yeLinux.
Ndatenda Gaël, Mandrake / Mandriva!
Ini ndakanga ndisati ndambofarira Fedora kudzamara ndaedza Fedora 22, ichine zvimwe zvinhu asi izvo zvandisina kufarira zvakakundwa mune iyi vhezheni vhezheni, ndakafarira dhizaini yekumisikidza uye zvimwe zvinhu zvitsva senge DNF inotumira iyo rubber ku yum. Kune rimwe divi, chokwadi chekuti Gnome 3.16 chinhu chinokosheswa kunyangwe ndichifanirwa kujairira kumwe mutsauko (makore ekushandisa ubuntu uye linux mint).
Zvakanaka ini ndinosiya chinongedzo kune avo vanoda kuziva maitiro ekuisa fedora, ndinovimba ichabatsira.
Kunyangwe zvimwe zvikonzero zvekuchinjira kuLibre Hofisi